किस्ट मेडिकल कलेजको कमाउने काइदा: बढी शुल्क नतिरे हाजिरीमै रोक | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
किस्ट मेडिकल कलेजको कमाउने काइदा: बढी शुल्क नतिरे हाजिरीमै रोक
प्रकाशित मिति १९ फाल्गुन २०७५, आईतवार १९:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । ललितपुरस्थित किस्ट मेडिकल कलेजले एमबिबीएस र बीडिएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग बढी शुल्क उठाउने गरेको छ । सरकार र विश्वविद्यालयले तोकेभन्दा बढी शुल्क नदिने विद्यार्थीलाई हाजिर गर्न समेत रोकिएको छ ।
कलेजले मन्त्रिपरिषद्बाट विर्धारित भन्दा लाखौँ बढी शुल्क असुल्ने गरेको विद्यार्थीले बताएका छन् । अवैध शुल्क नदिनेलाई परिचयत्र, लगबुक, लाइबेरी कार्ड नबनाइदिने र हाजिरी गर्न नदिने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटामा भर्ना हुन गएका विद्यार्थीसँग समेत मनोमानी शुल्क मागिएको छ । कलेजका शैक्षिक संयोजक किशोरीसिंह बस्नेतले अतिरित्त रकम नतिर्ने विद्यार्थीलाई हाजिर नगराउने चेतावनी दिने गरेको विद्यार्थी बताउँछन् ।
लिङ्देनलाई मार्ने धम्की दिनेको ‘कनेक्सन’ झापाकै नेतासँग
काठमाडौं । झापा ३ बाट निर्वाचित सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले आफूलाई धम्की दिने व्यक्तिको संलग्नता झापाकै नेतासँग रहेको दाबी गरेका…
यातायातमा सीसीटीभीकै मुनि बसेर घुष खाने तेजनारायण यादवसहित अधिकृतहरू ईश्वर रेग्मी, भूपराज दाहाल, शिवप्रसाद सुवेदी, विष्णुप्रसाद सुवेदी र शालिग्राम पौडेल माथि भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौँ । लामाे समय यातायात कार्यालयकाे सवारी अनुमति पत्र शाखामा बसेर अकुत सम्पती अार्जन गरेर अालिनशान बंगला बनाउन सफल…
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आज संसदको दुवै सदन अवरुद्ध पारेको छ ।
कांग्रेसले आफ्ना पूर्व सभापतिहरू तथा…
भरियालाई साढे १० बर्ष जेल !
काठमाडौं । १७ किलो सुनसहित पक्राउ परेका मनाङको नासो गाउँपालिका ९, दानाक्युका ३१ बर्षीया पासाङ लामालाई लमजुङ जिल्ला अदालतले…
महिलाले किन रोज्छन् पाको पुरुष सेक्सको लागी ? जानुहोस् तथ्य !
काठमाडौं। पुरुष चाहे त्यो १८ वर्षको होस् वा ३० वर्षको अथवा सो भन्दा माथिको । सबै उमेर समूहका पुरुषको…
सिंहदरबारमा भुस्याहा कुकुरको झुन्ड !
काठमाडौँ । देशकै मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा मुलुकका नीति निर्मातादेखि सर्वसाधारणको बाक्लो चहलपहल हुने गरेको छ ।
तर, सिंहदरबारमा मानिसको…